चप्पल लगाएर गाडी चलाउन नपाइने ! - Birgunj Sanjalचप्पल लगाएर गाडी चलाउन नपाइने ! - Birgunj Sanjalचप्पल लगाएर गाडी चलाउन नपाइने ! - Birgunj Sanjal
चप्पल लगाएर गाडी चलाउन नपाइने !
१८ पुष २०७६, शुक्रबार ०९:२५
काठमाडौं । ट्रक साहित्य पढ्न थाल्दा दुर्घटना बढेको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले यस्ता साहित्य हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले ट्रक साहित्यका कारण पनि सवारी दुर्घटना हुन थालेको भन्दै दुर्घटना न्युनीकरणका लागि यस्ता साहित्य तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको हो ।
विभागले दुर्घटना न्युनीकरण गर्न अपनाइनुपर्ने तत्कालीन उपायका रुपमा ट्रक साहित्य हटाउनुपर्ने लगायत ८ उपाय निकालेको छ ।
ती उपायमा गाडी चालकले चप्पल लगाएर चलाउन नपाउनेदेखि क्याबिनमा सजावटका सामान तथा म्युजिक सिस्टम नराख्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ ।
यस्ता सामान राखेको भए तत्काल हटाउनसमेत विभागले निर्देशन दिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बाह्रखरीसँग भने, “विभागले पैसा नलाग्ने, सजिलै कार्यान्वयन गर्न सकिने र दुर्घटनाको प्रकृति हेर्दा कहिलेकाँही त्यस्ता कारण पनि दुर्घटना भएको देखिएको हुँदा यी उपाय अपनाइएको हो ।”
यस्तै सार्वजनिक सवारीमा भाडादर पनि अनिवार्य टाँस्न विभागको निर्देशन छ ।
ट्रक साहित्यले कसरी दुर्घटना बढायो र ? भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा हमालले भने, “तपाईं पनि ट्रक साहित्य देखे पढ्नुहुन्छ । त्यसले तपाईंको ध्यान खिच्यो । ५ सेकेन्डमात्र स्टेरिङबाट ध्यान हटे गाडी खोलामा खसेन ।”
त्यसैले त्यस्ता कोटेसन पनि हटाउन निर्देशन दिएका हौं ।
सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचनामा भनिएको छ, “सवारी साधनमा लेखिएको सबै किसिमको स्लोगन वा कोटेसन हटाउनुपर्नेछ ।”
विभागको निर्देशनअनुसार अबदेखि सबै प्रकारका सवारी साधन चलाउँदा सवारी चालकले अनिवार्य जुत्ता लगाउनुपर्छ ।
यस्तै सवारीको विन्ड सिल्डमा स्टिकर वा कुनै वस्तु टाँस्न वा झुन्ड्याउन मिल्दैन । यसैगरी लामो दुरीका यात्रुवाहक सवारीको ढोकामा नै यात्रु क्षमता र सवारीमा मौजुदा यात्रुको सङख्या टाँस्न अनिवार्य गरिएको छ ।